Ahoana ny fomba hahatratrarako ny fifamoivoizana mankany amin'ny bilaogiko? Fantatrao ny ... | Fifamoivoizana hiara-miasa
Nanatsotra ny dokam-barotra. Manaova doka amin'ny an'arivony isan'andro, maimaim-poana
Safelist tiako indrindra
Ahoana ny fomba hahatratrarako ny fifamoivoizana mankany amin'ny bilaogiko?
Ianao no namaritra ny antsipirihanao akany manokana ho fanampin'ny fanombohana mamorona fampahalalana ary koa tranokala bilaogy sarobidy fanampiny izay ankasitrahanao tokoa dia hidina ao lasibatra tsena ary koa mifikitra amin'ny. Tranonkalanao fifamoivoizana ny statistika koa dia mijery ny tsia. Eny, mila takatrao fa mila mikendry Internet ianao tranonkala fifamoivoizana!
Raha ny mahazatra, ireo mpanoratra bilaogy, indrindra ireo izay tsy manome lanja firy ireo statistikan'ny fifamoivoizana an-tranonkala, dia tsy mahalala momba ny fomba tena azony ahazoana izany midika hoe fivezivezena amin'ny tranokala izany. Ny fifampiraharahana lehibe amin'ireo tompona tranokala dia miankina amin'ny tsy fahafantarana ankehitriny fa manahy ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fivezivezena amin'ny tranokala ary koa ny fomba tena mampiditra azy ireo amin'ny fivezivezena an-tserasera. Misy miovaova ho anao ny sahirana rehefa tsy misy olona miseho miahy ny amin'izay jerenao.
Ny fanoratana tranokala dia mety ho Asset
Raha velom-bolo amin'ny fanoratana tranokala ianao dia azonao atao tsara ny manatsara ny fampielezan-kevitrao ary manao an'io koa. Raha miaiky tsotra izao ny zavatra antenainao hatao ianao, aorian'izay, dia azonao atao ny mivarotra irery miaraka aorian'izay ary manangana toeram-ponenana.
Mahazo fifamoivoizana amin'ny bilaoginao
Ny manahirana etsy ambany dia, ahoana ny fomba ahafahanao mamorona fifamoivoizana amin'ny Internet amin'ny tranokalan'ny bilaoginao? Ataovy ao an-tsaina fa ny habetsaky ny fifamoivoizana amin'ny Internet dia ny hany antsoinao mba hahatonga ny tranonkalanao bilaogy hahomby. Mba hanovana ny fahalalanao azy ho lasa valisoa ara-bola ary koa asa iray hafa azo tsapain-tanana, dia tadidio ao an-tsaina ireo torohevitra ireo.
Manomàna karazana famandrihana mailaka ho an'ny tranokalanao blog voaomana. Mila manasa olona ao amin'ny tambajotrao hisoratra anarana. Azonao atao ny manomboka amin'ny olon-tianao, mpiara-miasa, mpiara-miasa, mpanjifa, ary koa pals.
Vakio, araho, ankoatra ny firesahana momba ny tranokalan'ny bilaogin'olon-kafa izay ao anatin'ny akany manokana kendrenao. Ataovy izay hahamety azy, mahaliana, ary koa fanehoan-kevitra feno fahendrena satria ho hita taratra tokoa ny fahaizan'ny mpanoratra bilaogy mamorona. Ilaina aminao ny maka sary an-tsary ny fahalianan'ny hafa, mihoatra ny mety hanaraka ny rohy internet amin'ny asanao manokana izy ireo.
Ampiasao ny endri-javatra Ping-O-Matic amin'ny tranokalan'ny tranokalan-tranonkala momba ny tranonkala isaky ny manomboka.
Alefaso any amin'ny motera fikarohana an-tserasera mahazatra ny tranokalanao ary koa tranokala tranokala misy tranokala blog. Betsaka amin'izy ireo no tonga maimaim-poana ankehitriny.
Aza adino ny mampiditra ny rohy internet amin'ireo tranokalan'ny bilaoginao amin'ny fampahalalana marika mailaka omenao.
Ampiasao matetika ny rohy internet amin'ny pejy Internet an'ny tranonkalanao na amin'ny karazana e-newsletter izay omenao ary koa atombohy. Ataovy amin'ny karazana fifandraisana rehetra apetrakao.
VAKIO IZANY Fifamoivoizana kendrena maimaimpoana ho an'ny rafitra
Raha mampiasa taratasy zaraina, karatra fandraharahana, ary koa brochure fanampiny ho an'ny paikadim-barotra sy marketing, dia alao antoka ny famoahana ny URL-n'ny bilaoginao.
Hodiovina izy io raha manana URL famahanana RSS ahafahan'ny olona misoratra anarana.
Ataovy ao an-tsaina ny famoahana ireo fanavaozana ao amin'ny tranonkalan'ny bilaoginao mba hitondrana mpanjifa betsaka kokoa.
Ny fampidirana ireo tolo-kevitra ireo amin'ny programa ataonao dia hanampy anao betsaka amin'ny varotra ny tranonkalanao tranonkala. Tsy izany fotsiny fa na izany aza, ianao koa dia mahazo mikendry ny fivezivezena amin'ny tranokala!
Namboarinao ny antsipirihanao manokana ary koa nanomboka nanoratra informative ary koa tranokala bilaogy mahasoa izay fantatrao fa tena hiteraka tsena kendrena ary koa hanaraka izany. Ny fangatahana voatanisa etsy ambany dia hoe, ahoana marina no ahafahanao mamorona fifamoivoizana tranokala amin'ny tranokalan'ny bilaoginao? Aza adino fa ny habetsaky ny fivezivezena amin'ny Internet dia ny ilainao fotsiny hahatonga ny tranonkalanao bilaogy azo antoka. Manaova karazana fisoratana anarana mailaka ho an'ny tranonkalanao bilaogy voavolavola. Vakio, araho, ary koa miresaka momba ny tranokalan'ny bilaogin'olon-kafa izay ao anatin'ny faritra kendrenao manokana.